Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta Iyo Wargeysyada Yurub, Messi, Neymar, Mbappe, Bilic, Musiala, Ozil, Depay, Tomori, Seedorf
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta iyo Wargeysyada Yurub, Messi, Neymar, Mbappe, Bilic, Musiala, Ozil, Depay, Tomori, Seedorf
December 16, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Rajada Paris St-Germain iyo Manchester City ee saxiixa Lionel Messi ayaa la siiyay rajo iyadoo musharaxa madaxweynenimada Barcelona Emili Rousaud uu sheegay in mushaarka ciyaaryahanka reer Argentine “uusan aheyn mid sii jiri kara” kooxda reer Spain, wixii ka dambeeya dhamaadka qandaraaskiisa xagaaga soo aadan. (AS)
PSG ayaa u sheegtay qeybta dhaqaalaha inay xoojiyaan saxiixa Messi, oo 33 jir ah, oo ka tagaya Barcelona . (Footballtransfers)
Daaficii hore ee Manchester City Pablo Zabaleta ayaa sheegay in kooxda ka ciyaarta Premier League ay tahaymeesha ugu fiican ee Messi haddii saaxiibkiisii ​​hore ee Argentina uu ka tago Barca . (thesun)
Waxaa jira “suurtagalnimo dhab ah” in Messi uu ka tago Barca kuna biiro PSG xagaaga dambe, iyadoo weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, 21, uu ka tagayo kooxda heysata horyaalka Faransiiska isla markaana uu ku biirayo Real Madrid . (TalkSport)
Bayern Munich ayaa diyaar u ah inay gacanta u geliso ciyaaryahanka khadka dhexe ee weerarka ka ciyaara Jamal Musiala, oo 17 jir ah, heshiis cusub oo ka badan £ 100,000 isbuucii iyadoo xiiseyneysa ciyaaryahanka heerka caalami ee England U21. (Boostada)
Wakiilka Mesut Ozil ayaa sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka, 32, uu doonayo inuu sii joogo Arsenal isla markaana uu arko lixda bilood ee ugu dambeysa qandaraaskiisa – inkastoo kooxda ay dooneyso inuu baxo Janaayo. (Tuttomercato)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira, oo 24 jir ah, ayaan ka fekeraynin inuu jabiyo heshiiskiisa amaahda ah ee xilli ciyaareedka ah ee Atletico Madrid isla markaana uu ku laabto Gunners bisha Janaayo, sida laga soo xigtay wakiilka ciyaaryahanka reer Uruguay. (Mirror)
Paris St-Germain ayaa diyaar u ah inay kala xaajooto heshiiska 22 jirka Lyon. 22 jirka garabka uga ciyaara France Houssem Aouar, kaasoo bartilmaameed u ahaa Arsenal xagaagii hore. (thesun)
Tababaraha Tottenham Jose Mourinho ayaa sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Harry Winks, 24, aan loo ogolaan doonin inuu amaah uga tago kooxda bisha Janaayo. (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee AC Milan iyo Turkiga Hakan Calhanoglu, oo lala xiriirinayay Manchester United, ayaa qarka u saaran inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda ka dhisan Serie A. (Tuttosport, italia)
Bartilmaameedkii hore ee Barcelona Memphis Depay, oo 26 jir ah, ayaan weli wax go’aan ah ka gaarin mustaqbalkiisa, iyadoo weeraryahanka reer Holland qandaraaska uu kula joogo Lyon uu dhacayo xagaaga soo aadan. (goal)
Arsenal iyo Marseille ayaa xiiseynaya saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal Fabio Vieira, oo 20 jir ah, kana soo jeeda Porto . (record.pt)